बुद्धको दर्शन : दुःख–सत्य र दुःख मुक्तिको बाटो - Sabal Post
कतिपय अवस्थामा मानिसहरु आफुलाई अभाव, कष्ट वा दुःखमा देख्दछन् । जसका कारण मानिस जीवनमा दुःख छ भनेर चिन्तित हुने गर्दछन्। तर हाम्रो मनमा किन दुःख आयो वा दुःख महशुस हुन थाल्यो, चिन्ताको खास कारण के हो ?यसबारे भने हामी कारण खोज्दैनौ । भगवान् गौतम बुद्धले मानिसलाई हुने यस प्रकारको चिन्ता र तनावबाट बच्न ७ सुत्रहरु दिनुभएको छ । जसको पालना गरेमा मानिसले आफुलाई दुःखमा पाउने छैन ।१. सम्यक दृष्टि :सम्यक दृष्टि अर्थात जस्तो छ त्यस्तै देख्नु । कुनैपनि कुरालाई हेर्दा, मूल्यांकन गर्दा आफ्नो धारणालाई बीचमा लिएर नहेर्नु नै बुद्धको प्रथम सुत्र हो । त्यही कारण कुनैपनि कुरालाई हेर्ने दृष्टि सम्यक हुनुपर्छ । अर्थात यथोचित दृष्टि हुनुपर्छ ।२. सम्यक संकल्प :सम्यक दृष्टि अर्थात जुन गर्न योग्य हुन्छ,
त्यही गर्नु र त्यसमा पुरा जीवन लगाउनु बुद्धको दोश्रो सुत्र हो ।बुद्धका अनुसार यस्तो संकल्प जो बोधबाट प्राप्त होस् र बाहिरी उत्साह नभई आन्तरिक उत्साहबाट होस ।३. सम्यक वाणी :सम्यक वाणी अर्थात हामी जे बोल्छौ, त्यही गर्नुपर्दछ । भित्र एउटा कुरा, बाहिरी अर्को कुरा राखेर नभई आफ्नो बोलीमा हृदयको अवस्था प्रकट गर्नु बुद्धको तेश्रो सुत्र हो ।मानिसले जुन कुरा बोल्नुपर्ने हो, जति मात्रामा बोल्नुपर्ने हो र जहाँ बोल्नु पर्ने हो त्यहाँ मात्र बोल्नुपर्छ ।४. सम्यक कर्म :सम्यक कर्म अर्थात यथोचित काम मात्र गर्नुपर्दछ । मानिसले त्यही काम गर्नुपर्छ जुन काम गर्न योग्य होस् । यो नै बुद्धको चौथो सुत्र हो । यस्तो काम गर्नाले जीवनलाई सार मिल्दछ । मानिसले त्यहि काम गर्ने जुन जरुरी छ ।यसलाई बुद्धले सम्यक कर्म भनेका छन् ।
५. सम्यक आजीव:सम्यक आजीव अर्थात आजीविका । बुद्धका अनुसार अरु कसैको अहित नगरी बाँच्नु नै सम्यक आजीविका हो । विध्वंसात्मक नभइ सृजनात्मक भई बाँच्नका लागि अरुलाई पीडा नदिई, अरुको जीवन नष्ट नगरी अरुको अहित नगरी जिउनु नै सम्यक आजीव हो ।६. सम्यक व्यायाम: सम्यक ब्यायाम अर्थात श्रम । सम्यक ब्यायामरश्रम भनेको आलस्य नभई कर्मठताका साथ गरीने परीश्रम वा शारीरीक कर्मलाई बुझिन्छ । यो नै बुद्धको छैठो सुत्र हो । बुद्धका अनुसार शरीर मार्ग हो भने सम्यक श्रमका लागी कर्म हो । र दुबैको समिश्रण जीवन हो ।७. सम्यक स्मृति: सम्यक स्मृती अर्थात मनमा कुविचार नराख्नु । कुनै पनि कर्ममा लिन हुदाँ सकेसम्म कुनै पनि कुविचार मनमा नराखि एकाग्रताका साथ सुविचार मनमा राख्नु नै बुद्धको सातौ सुत्र हो । बुद्धका अनुसार नराम्रो विचार मनमा राख्नु हुदैन, यसले हृदयलाई नै मार्ने गर्दछ ।
सरकार बाट बाहिरिने भनिएका उपेन्द्र यादवले पदभार…